China Mountain mpịachi igwe kwụ otu ebe igwe - ụlọ ọrụ EMB102 na ndị nrụpụta | Yizhicheng
Bee onwe gi nwayọ nwayọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ ịgba ọhụrụ ịgba ịnyịnya ígwè ma ọ bụ na ị na-achọ egwuregwu gị. Anyị maara na mmega ahụ nwere ọtụtụ uru, wee mezuo nke ahụ, Gọọmentị US na-atụ aro ka anyị niile nweta ma ọ dịkarịa ala awa 2,5 na-emega ahụ kwa izu.
Nke a ebike nwere ezigbo nhazi, Aluminium alloy frame, batrị lithium 48V 10.4AH, 48V 500W integrated wheel motor nhọrọ, shimano shimano tourney 7 ọsọ, 32km / h max ọsọ, onye na-ebugharị LCD. Ọnụahịa asọmpi dị egwu ($ 369- $ 389 / PC) dị ka iwu si dị iche iche. Nabata ka ị gbaa anyị ajụjụ ma ị nwee nsogbu ọ bụla. Anyị ga-arụ ọrụ awa 24 n'ịntanetị!
Mmiri > 500w
Nkwa Wheel 20 ""
Ọgbọ Na-enweghị ntụpọ, 48V / 500W
Ihe Eku Alumini Allo
Nwere ike Ee
Oke Ọsọ 30-50km / h, 32km ma ọ bụ ịtụ
Gburugburu kwa ike 31 - 60 km
Nọmba Model EMB102
Aha ahia Igwe igwe kwụ otu ebe
Eku alloy, TIG welded
Fork site na, TIG welded
Brake alloy diski breeki
Tọọ ntọala Alloy crank
Gear Set SHIMANO TOURNEY 7 ọsọ
Batrị 48V / 10.4AH, batrị Lithium
Sistemụ LCD panel
(Ga-abụrịrị usoro FOB ụgwọ) 2-103 iberibe
> = 260 iberibe
Ellingzụta Ngalaba: Otu ihe
Otu ngwugwu otu: 80X45X78 cm
Otu nnukwu ibu: 33,0 n'arọ
Dị ngwugwu: SKD 85%, otu setịpụrụ na katoodu ọ bụla nwere oke mmiri
Mpaghara ngwa Igwe igwe kwụ otu ebe
Ha na-enye ohere maka mmega ahụ aerobic dịgidere
Agbanyeghị, anyị makwaara na e wughi Rome n'ụbọchị. Yabụ maka ndị nke chọrọ obere agbam ume iji nyere anyị aka ịme ebumnuche ndị ahụ ka ọ ga-adịgide adịgide, anyịnya igwe eletrik na-eme ka ndị mmadụ nwee ike ịgba ịnyịnya ígwè, site na inye aka na ugwu, ibu na ihe karịrị.
Nke ahụ na-emetụta ma a na-eji ha maka njem ma ọ bụ na-emega ahụ naanị. Nke ọ bụla, ọ na-enye gị ohere ịga n'ihu na ogologo. Nsonaazụ gosiri na ndị mmadụ na-eji igwe eletrik arụ ọrụ karịa ka ha ga-eme n'agbanyeghị agbanyeghị enyemaka ọzọ, nsonaazụ a na - eme na ha enweela ahụike dị mma na obere anụ ahụ.
Nke gara aga: Ahaziri akpa nke ugbo ala nke 3kw elektrik - GGB101
Osote: Oche elele eletriki - ES101